Qaraxyo Ka Kala Dhacay Beledxaawo Iyo Kismaayo. – Calamada.com
Qaraxyo Ka Kala Dhacay Beledxaawo Iyo Kismaayo.
calamada January 8, 2019 1 min read
Qaraxyo dhaliyay khasaara ayaa ka kala dhacay degmooyinka Beledxaawo iyo Kismaayo oo ka kala tirsan gobalada Jubbada hoose iyo Gedo ee Konfurta dalka Somalia.
Degmada Beledxaawo ee Wilaayada Gedo waxaa qaraxa lala beegsadya goob fariisin u ah maleeshiyaatka mamaulka gaala raaca Murtad Axmed Madoobe iyadoo dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmadaasi.
Dadka deegaanka waxey sheegeen iney jirto khasaara Nafeet iyo mid hantiyadeed o0 maleeshiyaatka Murtadiinta lagu gaarsiiyay qaraxaasi.
Dhanka magaalada Kismaayo ee gobalka Jubbada hoose waxaa qarax lala beegsaday goob sidoo kale fariisin u ah maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Jubbo land waxa uu qaraxaasi sababay khasaara soo gaartay maleeshiyaatkii lala beegsaday.
Qaraxyadan ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Beledxaawo ayaa kusoo aadaya xilli sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaatka maamulka Amxaaro kalkaalka ah ee Konfur Galbeed uu ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee Wilaayada Baay iyo Bakool.
Previous: Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
Next: Raali Galin Ku Socota Akhristayaasha Iyo Dhageystayaasha Calamada.com.